Uncategorized – Khabar 27 Media
October 8, 2021 October 8, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on कतारमा गैरकानुनी रुपमा बसेका नेपालीका लागि आयो खुसीको खबर
कतार नेपालीहरुको लागि वैदेशिक रोजगारमा जान मुख्य देश हो । लाखौं नेपाली कतारमा कामदारका रुपमा छन् । कतिपय नेपाली गैरकानुनी रुपमा बसेका छन् । त्यसरी गैरकानुनी रुपमा बसेका नेपालीहरुका लागि कतार सरकारले अवसर दिएको छ । कतारले गैरकानुनी रुपमा बसेका विदेशी कामदारलाई आममाफी दिने भएपछि अब थुप्रै नेपालीले पनि लाभ उठाउने भएका छन् । कतारमा […]
October 5, 2021 October 5, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on साक्षात लक्ष्मीका स्वरुप मानिन्छन् यी राशिका युवती, आगमनसँगै हुन्छ घर स्वर्गसमान
फरक९फरक राशिको आचरण, भाग्य र व्यवहार फरक हुने गर्छ। हुन त स्त्रीलाई लक्ष्मीको स्वरुप मानिन्छ। तर पनि केही राशि छन् ती राशिमाथि झन् बढी लक्ष्मी माताको कृपा रहने गर्छ। अझ भन्नु पर्दा ती राशिका व्यक्ति लक्ष्मीका अति प्रिय हुने गर्छन्। वृष राशीः वृष राशीको स्वामी शुक्र हो जसका कारण वृष राशिका मानिसहरु शुक्र ग्रह बाट […]
September 19, 2021 September 19, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on उसिनेको अण्डा खाएपछि भुलेर पनि न’खानुहोस् यी ४ चिज, निम्त्या’उँछ यस्तो ख’तरा !
अण्डामा पाइने प्रोटिनहरूले तपाईंको शरीरलाई उर्जा दिन्छ, हड्डीहरूलाई सुदृढ पार्छ र आँखाको लागि पनि स्वस्थ हुन्छ। भरपूर पौष्टिक तत्व समावेश गरेकै कारण अण्डालाई पौष्टिक आहारको श्रेणीमा राखिएको छ। अण्डा खाँदा विभिन्न फाइदा त मिल्छ नै तर यदि तपाईं दैनिक रूपमा उसिनेको अण्डा खानुहुन्छ भने केहि कुराको ख्याल राख्न अत्यन्त जरूरी हुन्छ।आज हामी तपाईंलाई यस्तै चीजको […]
September 19, 2021 September 19, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on स्वास्थानी माताको मुर्तीमा के भयो यस्तो ? संस्कृतिविद् र स्थानिय बासीन्दा पनि चकित परे !
काठमाडौँ । दोलखा भीमसेन, नाला भगवतीलाई बेला बेलामा पुसिना आउने कुरा त तपाईले सुन्नुभएकै छ । तर स्वस्थानी माताको मुर्तीमा पनि पसिना आएपछि स्थानिय छक्क परेका छन् । अब के होला भन्ने डर पनि छ । शनिवार बेलुका नित्य पुजा गर्ने बेलामा मन्दिरका पुजारीले माताको मुर्तीमा पसिना आएको देखेपछि सबैलाई खबर गरे ।अनुहारमा आएको पसिना […]
August 16, 2021 August 16, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on पेट्रोलपम्पमा कार्यरत सहायक निरीक्षकको कमाई एक करोड
काठमाडौं । प्रहरी सहायक निरीक्षकको वैधानिक कमाई कति होला ? कानूनले तोकेअनुसार नै हुन्छ । आम मानिसले जान्ने कुरा यही हो । तर प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गरेको पेट्रोलपम्पमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षकले गैरकानूनी रूपमा रु एक करोड तीन लाख ९७ हजार ९३७ बराबरको कमाई गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष […]
July 5, 2021 July 5, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on आफ्नै श्रीमती र ६ वर्षीय छोरा मा’रेर रातभरी अँगालो हालेर सुतेका श्रीमानले दिए यस्तो चकित पार्ने बयान
काठमाडौ । बनेपामा घटनामा अस्पतालमा उपचार पछि घर फर्केका कमल भनिने माधवप्रसाद घिमिरेले चकित् पार्ने वयान दिएका छन् । उनको ६ बर्षिय छोरा युवान घिमिरे र युवानको आमा ३० बर्षिया मनिषा कार्की घिमिरे (उपाध्याय) को रहस्यम निधन भएको थियो । ३३ बर्षिय कमल भनिने माधवप्रसाद घिमिरे अस्पतालमा उपचारार्थ थिए । उनी उपचार पछि पक्राउ परेका […]
June 27, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on पेटको सम्बन्धी रोगहरुको उपचारका केहि घरेलु उपाय
अल्सर हुँदा दुखाई बढेर आउने, खाली पेट बस्न नसक्ने खायो कि पेट दुखिहाल्ने र कसै कसैलाई बान्ता हुने, खान मन नलाग्ने समस्या बढ्दै जाँदा दिसा कालो पनि हुनसक्छ । तर, सबैमा ग्यास्ट्रिक र अल्सरका लक्षण यस्तै नहुन पनि सक्छन् । यसो भनिरहँदा पेटका हरेक समस्या ग्यास्ट्रिक र अल्सरमात्र हुँदैनन् । युवा वर्गमा पेटको एक विशेष […]
May 28, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on आज एकैदिन झण्डै १० हजार जनाले जिते कोरोना, निधन हुनेको संख्या ९६
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ९,८४१ पुगेको छ । एकै दिन संक्रमणमुक्त हुने यो अहिलेसम्मकै धेरै संख्या हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज ९ हजार ८४१ जनाले कोरोना जितेका छन् । यो संख्या नयाँ संक्रमितभन्दा संख्या नयाँ संक्रमितभन्दा २९ सय ८६ ले बढी हो । योसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको […]
May 1, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on भारतमा फैलिएको नयाँ लहर डरलाग्दो हिसाबले फरक, डाक्टर समेत हैरान
यही अप्रिलमा नयाँ दिल्लीको केन्द्रमा रहेको सर गंगाराम अस्पतालमा खोप लगाएका ३७ चिकित्सकलाई पुनः कोभिड–१९ संक्रमण भयो। यीमध्ये अधिकांश चिकित्सकमा सामान्य लक्षण देखिएको थियो तर यो घटनाले भारतमा दोस्रो लहर ल्याउन जिम्मेवार भाइरस फरक छ भन्ने आशंकालाई पुष्टि ग¥यो। प्रतिरक्षा प्रणालीलाई समेत छक्याइरहेको भाइरसको यही प्रजातिले भारतमा महामारी तीव्र बनाएको चिकित्सकको तर्क रह्यो। तर हालसम्म […]
March 7, 2021 March 7, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on अदालतको फैसला पछि ओली पक्षमा खुसीयाली, मुसुक्क मुस्कुराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो प्रतिकृया
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको बारेमा दिएको फैसला पछि पूर्व एमालेमा खुसीयाली छाएको छ । उनीहरुले नेकपा एमाले भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खुसी ब्यक्त गर्दै प्रतिकृया दिएका छन । सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपाको वैधानिकता बदर गर्दै साविक माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँताइदिएको हो । यो फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष खुसी देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै […]